चीनमा कोइला खानीमा परेर २३ जनाको मृत्यु – AB Sansar
चीनमा कोइला खानीमा परेर २३ जनाको मृत्यु
December 6, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on चीनमा कोइला खानीमा परेर २३ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । चीनमा कोइला खानीमा भएको दुर्घटनामा परेर कम्तीमा पनि २३ जनाको ज्यान गएको छ । चीनको चोकिङमा रहेको एक कोइला खानीमा सो दुर्घटना भएको बताइएको हो । उक्त क्षेत्रको सो कोइला खानीमा अधिक मात्रामा कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा बढी रहेकोले ग्याँस विस्फोट भएको थियो ।
त्यस दुर्घटनामा परेर २३ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस दुर्घटनामा परेका अर्का एकजनालाई भने उद्धार गरेर बाहिर निकालिएको यहाँका उद्धारकर्मी तथा मजदुरहरुले जानकारी दिएका हुन् । चीनको समाचार समिति सिन्ह्वाले दिएको समाचारमा शुक्रबार अपरान्ह पाँच बजेतिर सो खानीमा उक्त दुर्घटना भएको थियो । त्यो कोइला खानी करिब दुई महिना अघिदेखि बन्द गरिएको थियो ।
सरकारले तय गरेका सुरक्षाका मापदण्डहरु पूरा नगरेको भनेर उक्त कोइला खानी बन्द गरेकोमा हालैमात्र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । चीनमा कोइला खानीमा यस्ता दुर्घटनाहरु बारम्बार हुने गरेका छन् । यस दुर्घटनापछि यस खानीको पनि अनुसन्धान गरिने भएको यहाँको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । –एएनआई
नारायण नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिका भतिजी र बुहारीलाई नियुक्ती
मृतकको संख्या १५९४ पुग्यो,आज एकैदिनमा यति धेरैको कोरोनाले लियो ज्यान।
संसारकै एक अनौठी महिला जसको मुटु नै छैन, बाँचेकी छन् यसरि (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
December 21, 2020 Ab-संसार
कोरोनाले स’ता’इरहेका बेलामा गयो ६.२ म्याग्नीच्युडको श’क्ति’शा’ली भूकम्प !
विवाहकै दिन दु’र्घ’टना, जन्ती लिएर अस्पताल गएका बेहुलाले गम्भिर अवस्थाकी बेहुलीलाई बेडमै लगाइदिए सिन्दुर !
December 16, 2020 Ab-संसार